Ihe jọgburu onwe ya 2014 CMO Nduzi maka Social Landscape | Martech Zone
Nyaahụ, enwetara m akwụkwọ a ma na-achọ ịpị mbipụta mgbe m kụrụ biya biya na laptọọpụ m. Enwere m olile anya na ọ bụghị karma na-abịa agba m ụkwụ. Laptọọpụ ahụ anwụghị, mana n'ụzọ ụfọdụ, akwụkwọ ozi post na-efu efu. M na-ede ihe a na post na-esi ísì ụtọ nke biya na ndabere iji chetara m ka m ghara ịda mbà.
Nke a bụ ihe ahụ, echere m na nke a bụ ihe egwu egwu. N'ihe anya, enweghi akuko banyere akuko zuru oke. Ọ bụ naanị nchịkọta nke echiche ndị anakọtara site na isiokwu na akụkọ na - ekwenyere m - ga - eme ajọ njọ na ụzọ ụlọ ọrụ na - etinye usoro mgbasa ozi mmekọrịta mmekọrịta dị ukwuu itinye aka na iwulite azụmaahịa ya n'ịntanetị. Ekeghị ya maka B2B, B2C, ogo azụmahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ug.
Nke mbụ, enweghị aha ọ bụla banyere mmadụ nke mmadụ emenye m ụjọ. Awarenessmara ihe abụghị otu ihe ahụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Hụ a logo bụ ika mmata. Chịkọta ikike na ntụkwasị obi n'ịntanetị, ịkwanye ọtụtụ ndị ọbịa iji tọghata bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke chọrọ mmekọrịta mmụọ. Ekwetaghị m na mmata ọhụụ bụ akụkụ bụ isi nke iji usoro ntanetị mgbasa ozi, ekwenyere m na iwulite aha onwe onye bụ. Ndị mmadụ tụkwasịrị ndị mmadụ obi… na ụfọdụ n'ime ndị ahụ na-arụ ọrụ maka ụdị. Enweghị m mkparịta ụka ma ọ bụ gụọ echiche nke ụdị dị n'ịntanetị, ana m ekwu okwu, kekọrịta ma zụta n'aka ndị mmadụ.
Achọghị m ịma banyere okporo ụzọ. Okporo ụzọ adịghị mkpa ọ gwụla ma okporo ụzọ na-ebute nsonaazụ azụmahịa. Àgwà na mgbanwe bụ karịa okporo ụzọ. Enwere m ike ịga zụta mgbasa ozi nke na-ebugharị ọtụtụ narị puku echiche na weebụsaịtị, ọ baghị uru ọ gwụla ma okporo ụzọ ahụ dị mkpa, nwere mmasị, ma na-eduga n'okporo ụzọ ntụgharị. LinkedIn “di mma” mana Facebook di nma? Maka onye?
Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze bụ ọ bụghị banyere nyiwe, ọ bụ maka ihe ha na-eme ọfụma ma ha anaghị eme nke ọma iji nyere ụlọ ọrụ azụmaahịa kwurịtara okwu na atụmanya na ndị ahịa ha. Kama nyiwe, nke a kwesịrị ikwu maka ọdịnaya ị nwere ike ịkekọrịta, otu ị siri kesaa ya, yana ihe onye ahịa ma ọ bụ atụmanya nwere ike iji ya mee. Hà nwere ike ikwuputa banyere ya? Hà nwere ike ịkọwanye ozi gị na ndị na-ege ntị dị mkpa karị? Hà nwere ike isi na ya zụta ihe? Nyiwe ga-abịa na-aga, ma na-elekọta mmadụ omume bụ isi.
Nkwukọrịta ndị ahịa adịghị mkpa, ahịa ọgụgụ isi na-eme. Gini bu uche nke ika gi na ntaneti? Kedu ka esi amata gị ma e jiri ya tụnyere asọmpi gị? Kedu ihe ndị mmadụ chọrọ na ụlọ ọrụ gị? Na-ejikwa aha gị nke ọma? You na-ejere ndị ahịa gị ozi nke ọma na mmekọrịta mmekọrịta ebe ebe ọrụ ndị ahịa gị na-ekerịta n'ihu ọha? Kedu ihe ị na-eme na ụda olu data na ọgụgụ isi na-adịghị akwụsị akwụsị gbasara atụmanya gị na ndị ahịa gị?
Enweghị mkparịta ụka nke mobile (na mpụga nke ngwa Instagram), local, na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ? Akụkụ atọ nke mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-eweta ọtụtụ mmepe, mkpọtụ na nsonaazụ? Kedụ maka otu esi arụ ọrụ n’elu ikpo okwu gafee ngwaọrụ ma lekwasịrị anya nke ọma? Enweghị m ike ikwenye na enweghị ozi dị na nke a mgbe ị na-agwa odida obodo nke mgbasa ozi mmekọrịta.
Achọghị m ka m banye n'ime etu SEO siri mee ya n’elu tebụl. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele nnukwu infographic nke nwere ike inyere gị aka mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta gị, lelee Ntuziaka Uzo nke Na-agagharị Social Media, Etu ulo ahia si eji Social Media, Social Mpaghara Mobile na Iwu 36 nke Social Media maka ụfọdụ ozi bara uru.
M hụrụ n'anya n'ezie CMO.com - M na-agụ ụfọdụ ozi na ndụmọdụ dị ịtụnanya n'ebe ahụ kwa ụbọchị, mana ihe ọmụma a na-efunahụ akara maka onye na-ere ahịa na-azụ ahịa iji na-elekọta mmadụ mgbasa ozi nke ọma. Emela okpokoro n'ime Photoshop ma kpoo ya ihe omuma. Nweta a ọkachamara infographic imewe ma kọọ akụkọ ndị ahịa nwere ike ịghọta, rie, kwenye ma kesaa!
Nwere ike ịlele infographic a ma kwenyeghị m. Achọrọ m ịma, ndụmọdụ bara uru ị chịkọtara site na akwụkwọ ozi a na otu ị ga - esi tinye ya maka azụmaahịa gị.
Tags: 2014 na-elekọta mmadụ odida obodoọjọọ infographicmara amaraKedunkwukọrịta ndị ahịaFacebookgoogle +infographicinfographic imeweinstagramLinkedInPinterestezigbo infographicAslideshareọgbọ okporo ụzọTwitteryoutube
Usoro Digital Digital Marketing 2014 gị